Pwere Ingabvuma Kupinda Pabonde Here? Pwere Ingabvuma Kupinda Pabonde Here?
Mutemo uyu hauna kumira zvakanaka nekuti unokanganisa kodzero dzevana. Dare reConstitutional Court nguva yadarika apo raitonga nyaya yaMudzuru na- Tsopodzi vachipokana negurukuta rinoona nezvemutemo rakatura mutongo wekuti munhu ane makore 18 bedzi ndiye ane kodzero yekutanga kuita mhuri.
Zvii zvatingabura kubva muhurukuro iyi?
a) Mwana ane makore 12 ekuberekwa haakwanisi kubvuma nyaya dzepabonde kana zvimwe zvine chekuita nebonde.